कसैलाई टोक्नेबित्तिकै किन मर्छ मौरी ? - NewsPolar NewsPolar
कसैलाई टोक्नेबित्तिकै किन मर्छ मौरी ?
२२ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:०९
एजेन्सी । मौरीका बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सुनेका छौं, जसमध्ये एउटा कुरा मौरीले कसैलाई टोकेपछि उसको मृत्यु हुनु हो । तर यस मामिलामा कति सत्यता छ, आज हामी तपाईलाई यसको बारेमा बताउन गइरहेका छौं । वास्तवमा, यदि हेर्दा, यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन । किनकी कतिपय जातका मौरीले टोक्न पनि सक्दैनन् ।
जबकि कतिपय माहुरीले डसेर मर्छन् । पेन स्टेटमा मोलेक्युलर, सेलुलर र इन्टिग्रेटेड बायोसाइन्सेसका डक्टरल विद्यार्थी एलिसन रेका अनुसार संसारभर माहुरीका करिब २०,००० प्रजातिहरू छन्, ती सबैले टोक्न सक्दैनन् ।
वास्तवमा ‘स्टिङलेस ग्रुप’ अर्थात् सुँडविनाका मौरीले टोक्न सक्दैनन्, त्यसलाई ‘माइनिंग बीज’ पनि भनिन्छ। यी माहुरीहरूमा सुँडहरू हुन्छन्, तर तिनीहरू सानो आकारको कारणले प्रभावकारी हुँदैनन् । त्यसैले कसैलाई हानि पुर्याउन सक्दैनन् ।
दुई दशकदेखि मौरीमाथि अध्ययन गरिरहेका वाशिङ्टन स्टेट युनिभर्सिटीका आणविक जीवविज्ञानी निकोलस नेगरका अनुसार सँुड नभएका मौरीका ५०० भन्दा बढी प्रजाति छन् । यी मौरीले डस्नुको सट्टा टोक्छन् ।
एलिसन रेका अनुसार मौरीहरू प्रायः मानिस वा अन्य कुनै स्तनपायी जनावरलाई डसेर मर्छन् । यो तिनीहरूको सुँडको शरीर रचना को कारण हो । वास्तवमा, तिनीहरूको सुँड काँटेदार हुन्छ, जुन छालाको भित्री भागमा जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुँड एक ठाउँमा रहन्छ र सुँडमा विष पनि पम्प हुन्छ ।
यस्तै निकोलस नेगरका अनुसार करिब १० प्रजातिका मौरी भने अन्य कीरा वा माकुरालाई टोकेर मर्दैनन् । यी मौरी आफ्नो घारमा आक्रमणको खतरा महसुस गरेपछि मात्र देखिन्छन् । मौरीले आफ्नो सुरक्षाका लागि अन्य कीराहरूलाई आक्रमण गर्छ ।
यदि तपाईं यस अवस्थामा मौरीहरू किन मर्दैनन् भनेर सोचिरहनुभएको छ भने, यसको कारण यो हो कि सुँड सामान्यतया कीराको पातलो एक्सोस्केलेटन छेड्न सफल हुन्छ र डंक गरेपछि सजिलै निस्कन्छ । एकै समयमा, मानिसको छाला कीराको छाला भन्दा धेरै मोटो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा डंक भित्रै अड्किन्छ ।
मानिसलाई टोकेपछि मौरी उड्छ तर त्यसको डंक त्यहीँ रहन्छ । जसका कारण यसको पेटका अंगहरू पनि तानिन्छ, त्यसपछि मौरीको पेटमा एउटा प्वाल मात्र रहन्छ । टोकेपछि भलै उनीहरु केही घण्टा बाँच्न सक्छन् तर अर्गान फेलियरका कारण उनीहरुको मृत्यु हुन्छ ।